Koorsooyinka Top 10 Adobe Illustrator Koorsooyinka | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Design Graphic, General, muujiye
1 Halkee looga baran karaa Adobe Illustrator khadka tooska ah
2 Koorsooyinka Adobe Illustrator ee bilowga ah
2.1 Hordhaca Adobe Photoshop
2.2 Sawirqaade CC ee Newbies - Laga soo bilaabo Eber ilaa Khabiir!
2.3 Adobe Illustrator: Sawirka Vector ee ka xoq
3 Koorsooyinka Mawduucyada Adobe Illustrator
3.1 Adobe Illustrator aqoonsi muuqaal ah
3.2 Adobe Illustrator oo ku saabsan qorista, qorista iyo naqshadeynta
3.3 Naqshad Daabacan - Diyaargarow loogu talagalay in lagu dheellitiro Sawirka
3.4 Adobe Illustrator ee naqshadaha
3.5 Farshaxanka 'vector': wuxuu ka tarjumayaa qaabkaaga Sawirka
4 Koorsooyinka Adobe Illustrator ee horumarsan
4.1 Advanced Adobe Illustrator ee Sawirka
4.2 Adobe Illustrator CC - Heer Sare: Muuqaalka Muuqaalka. 2021
Halkee looga baran karaa Adobe Illustrator khadka tooska ah
Haddii aad xiiseyneyso naqshadeynta garaafka oo aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka barto sawirrada dulinka, waxaad ku sameyn kartaa kombuyuutarkaaga, adigoon guriga ka bixin. Waxaa jira barnaamijyo badan oo bixiya koorsooyin diiradda lagu saarayo hagaajinta tababarkaaga Adobe Illustrator, sida: Domestika, Undemy ama Crehana. Dalabku waa mid aad u ballaaran, sidaa darteed, waxaan sameynay xulashada koorsooyinka sawireyaasha ugufiican ee laga heli karo shabakada, sidaa darteed waxaad dooran kartaa midka ku habboon heerkaaga iyo danahaaga
Koorsooyinka Adobe Illustrator ee bilowga ah
98% jawaab celin togan
10h 9m oo fiidiyow ah
5 koorsooyin sawir-qaade aasaasi ah
Koorsadan oo ah hordhaca Adobe Illustrator, waxaa baray Aarón Martínez, waa ku habboon in lagu bilaabo barnaamijka. Sida dhammaan koorsooyinka Domestika, mar alla markii aad iibsato waxaad leedahay marin aan xad lahayn, markaa waxaad ku qaadan kartaa xawaarahaaga. Aad buu u dhameystiran yahay, wuxuu ka kooban yahay 6 baloog, 77 cashar Isku soo wada duuboo, waxay ka soo bilaabayaan aasaasiga aasaasiga ah ilaa sharaxaada kuwaas oo ku siin doona heer kugu filan oo aad ku qaban karto shaqo tayo sare leh softiweerkan. Koorsadan:
Waxaad baran doontaa inaad ku wareeji interface-ka iyo in la isticmaalo qalabka ugu faa iidada badan.
Waxaad ogaan doontaa sida sawirro dijitaal ah.
Waxaad ku shaqeyn doontaa midabada, waxaad abuuri doontaa palettes oo aad baran doontaa farqiga u dhexeeya qaababka midabbada kala duwan.
Waad abuuri doontaa qoraallo soo jiidasho leh.
Waxaad ogaan doontaa sida loo hagaajiyo naqshadahaaga in lagu daabaco internetka ama la daabaco.
Sawirqaade CC ee Newbies - Laga soo bilaabo Eber ilaa Khabiir!
Casharrada lagu barto dhammaan sirta sfotware
Hadafkaagu waa baro sida loo maareeyo barnaamijka sida khabiir, waxaad xiiseyneysaa naqshadeynta garaafka waxaadna jeceshahay inaad barato sida loo sameeyo astaamo ama sawirro, kani waa koorsadii aad raadineysay. Waxay ka kooban tahay 10 qaybood, wadar ahaan 96 fasal, taas oo aad ku kasban doonto dhammaan aqoonta lagama maarmaanka u ah si aad uga faa'iideysato fikradahaaga ugu hal-abuurka badan, xitaa haddii aadan waligaa barnaamijka horay u ciyaarin!
Waa koorso aad u dhameystiran, taas oo wax walba lagu baro jimicsi wax ku ool ah oo xitaa taabanaya naqshadeynta 3D. Waad heli kartaa koorsada markasta oo aad rabto, xitaa ka dib markaad dhameyso, waad ku celin kartaa casharrada inta jeer ee aad u baahan tahay ilaa aad dareento inaad si fiican ula qabsatay.
Adobe Illustrator: Sawirka Vector ee ka xoq
8h 3m oo fiidiyow ah
Baro aasaaska sawirka vektorka
Este Koorsada Domestika, waxaa baray aasaasayaasha istuudiyaha hal abuurka ah ee Marmota vs Milky, waa ikhtiyaar kale oo weyn oo aad ku siin karto kanaga tallaabooyinka ugu horreeya ee Adobe Illustrator. Waxay ka kooban tahay 6 baloog, 58 cashar guud ahaan, taas oo aad ku baran doontid wax walba oo ku saabsan aaladda iyo wanaag batteriga tilmaamaha si aad u abuurto sawirro asal ah. Waxa ugu fiican ee koorsada waa taas diiradda saaray dhisidda faylalkaaga gaarka ah, sidaa darteed maheli doontid oo kaliya sharaxaad ku saabsan aaladaha iyo farsamooyinka ugu faa iidada badan, waxaad sidoo kale fursad uheli doontaa in lagugu dhiirigeliyo oo aad kobciso awooda aad ku abuuri karto fikradaha hal abuurka leh.
El cilladda keliya ayaa ah in koorsada ay ku baxeyso Boortaqiis, laakiin ha argagixin, waad dhaqaajin kartaa sCinwaanada Isbaanishka iyo afar luuqadood oo kale.
Koorsooyinka Mawduucyada Adobe Illustrator
Adobe Illustrator aqoonsi muuqaal ah
97% jawaab celin togan
7h 30m oo fiidiyow ah
Baro qaabeynta astaamaha muuqaalka ee sumadda
Aqoonsiga muuqaalku waa kan matalaad astaan ​​ahJaleecada hore, waxay awood u leedahay inay gudbiso qiimaheeda iyo ruuxiisa waxayna ka caawisaa inay ka soocdo tartanka. Adobe Illustrator aqoonsi muuqaal ah, waa koorso Domestika ah oo aad ku baran doontid bartaan barnaamijka si loo horumariyo dhammaan calaamadaha iyo ilaha sawirada taasi waxay astaan ​​u tahay sumadda.
Waxay ka kooban tahay 6 baloog, 48 cashar wadar ahaan in ay ka soo bilaabaan aasaasiga ugu badan, markaa waa gebi ahaanba ku habboon bilowga.
Adobe Illustrator oo ku saabsan qorista, qorista iyo naqshadeynta
96% jawaab celin togan
3h 39m oo fiidiyow ah
Naqshadeynta Calligraphic ee Adobe Illustrator
Este xirmo 5 koorsooyin Domestika ah waxay ku habboon tahay kuwa farta jecel iyo waraaqaha. Ahaanshaha sameysmo ka bilaabma a sharaxaadda sida Sawiraha u shaqeeyo iyo sida looga dhaqaaqo isdhexgalka, waad sameyn kartaa xitaa haddii aadan gebi ahaanba waxba ka ogayn barnaamijka. Iyada oo loo marayo 44 cashar, waxaad ku baran doontaa:
Lo aasaasiga u ah horumarinta aqoon u leh softiweerka
Sidee qalabka waxtarka badan
Si looga faa'iideysto waxyaabaha kala duwan qaab qoraalka iyo farsamooyinka farta si loo shakhsiyeeyo
A abuur fartaada
Farsamooyin iyo qalab si aad xoogaa u hesho dhameystir xirfadeed
Naqshad Daabacan - Diyaargarow loogu talagalay in lagu dheellitiro Sawirka
Soo ogow sida loo diyaariyo nashqadahaaga daabacaadda dejinta
Koorsadani waa tan loogu talagalay kuwa horey loogu bilaabay barnaamijka iyagoo raadinaya inay wax badan ka bartaan diyaarinta shaqooyinkooda daabacaadda dejinta iyo shaqaalaha daabacaadda, hawlwadeenada garaafka ama naqshadeeyayaasha garaafka leh xiisaha ay u qabaan arimahan gaarka ah. Waxay kuu sharxi doonaan qalabka lagama maarmaanka ah xakamaynta asalka asalka daabacaadda, waxay kuu sheegi doonaan xaddidaadda nidaamka daabacaadda iyo astaamaha ay ahayd inuu faylka asalka ahi lahaado. Waa a koorso xirfadeed, oo diiradda lagu saaray sidii loo gaari lahaa natiijooyin badan oo xirfadeed, keydinta ilaha dhaqaale iyo waqtiga.
Adobe Illustrator ee naqshadaha
3.9 / 5 qiimeyn togan
2h 30m oo fiidiyow ah
Adobe Illustrator ayaa lagu dabaqay dhismaha
Koorsadani waa loogu talagalay naqshadayaasha, nashqadeeyayaasha gudaha, injineerada dhismaha iyo farshaxanleyaasha doonaya inay bartaan sida loo isticmaalo Sawir qaade si uu kuugu soo bandhigo mashaariicdaada dhismaha. Sawiradu waxay leeyihiin qiime aasaasi ah marka ay timaado inaad fikrado u muujiso macaamiisha isla markaana koorsadan waxaad awoodi doontaa inaad naqshadahaaga u qaaddo heerka ku xiga. Koorsada sidoo kale waxaa ku jira hordhac ku saabsan maaraynta barnaamijka, sidaa darteed uma baahnid inaad horay u isticmaashay, waad baran doontaa markaad socoto.
Farshaxanka 'vector': wuxuu ka tarjumayaa qaabkaaga Sawirka
4h 58m oo fiidiyow ah
Ma xiiseyneysaa sawir iyo sawir? Adobe Illustrator waa barnaamij muhiim ah oo ku shaqeynaya sawirrada dulinka. Koorsadan uu baray sawir qaade Daniele Caruso waxaad baran doontaa farsamooyinka lagama maarmaanka u ah qabashada fikradahaaga oo aad qaaddo tallaabooyinkaaga ugu horreeya adduunka ee farshaxanka vector. Waxa ugu fiican ayaa ah inaadan u baahnayn inaad khibrad hore uhesho la shaqeynta Sawirqaade maxaa yeelay, in kastoo aysan koorso hordhac u ahayn barnaamijka, wuxuu kuu sharxi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato iyo sida casharrada waxaad ku qaadan kartaa xawaarahaaga, wax dhibaato ah ma lahaan doontid. Koorsadu waxay ku qoran tahay Ingiriis, laakiin way leedahay Cinwaanada Isbaanishka.
Koorsooyinka Adobe Illustrator ee horumarsan
Advanced Adobe Illustrator ee Sawirka
11h 22m oo fiidiyow ah
U gudub heerka xiga
Koorsadan Aarón Martínez waa ku habboon kor u qaadista heerkaaga iyo xirfaddaada Adobe Illustrator. Si taas loo sameeyo waa lagama maarmaan in la ogaado barnaamijka, sidaas Haddii aadan waligaa isticmaalin, waxaa fiican inaad ku bilowdo koorsada hordhaca ah ku saabsan Adobe Illustrator in aan kugula talinno bilowga boostada oo tan gadaal uga tagno. Waxay ka kooban tahay 5 qaybood oo ka kooban, 49 cashar oo wadar ahaan ah, wuxuu diiradda saaray inaad barato tabaha ugu muhiimsan ee sawirada sare. Waa a koorso wax ku ool ah, waxaad baran doontaa inaad ku abuurto sawirro qaab "doonid fidsan", isbeddellada ugu dambeeyay ee shabakadda; waxaad qorsheyn doontaa a xayeysiintain, la ciyaaro midabada midabka leh iyo noocyada kala duwan; oo waxaad ogaan doontaa sida loo qaabeeyo sawir tafaftiran oo mug leh, adoo adeegsanaya qalab "gradient"
Adobe Illustrator CC - Heer Sare: Muuqaalka Muuqaalka. 2021
4.8 / 5 qiimeyn
Si qoto dheer u baro barnaamijka
Koorsadan uu baray Marlon Ceballos, La-Taliyaha Codsiyada Adobe, waa 100% wax ku ool ah waxayna kaa caawin doontaa inaad isticmaasho farsamooyinka ugu horumarsan iyo aaladaha barnaamijkan naqshadeynta si aad shaqadaada u gaarsiiso heerka ku xiga. Inta lagu gudajiray koorsada, waxaad heli doontaa feylal aad ku tababarto dhamaadka cutub walbana waxaad fulineysaa mashruuc lagu xoojinayo wax kasta oo aad soo baratay. Maxaa intaa ka badan, qiimaha sidoo kale waxaa ka mid ah helitaanka adeegyada khadka tooska ah sida Adobe Color ama Adobe Capture app-ka gacanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 10ka koorsooyinka Adobe Illustrator ee ugu fiican khadka tooska ah